Warar - 2020 CBE oo ku taal Shanghai waab lambar N4-H21
Sanadka 2020, waxaan kaqeyb galnaa carwada CBE ee Shanghai laga bilaabo 8-da ilaa iyo 12-keeda.
Waxaan soo bandhigeynaa badeecadaheena ugu muhiimsan, sida mashiinka buuxinta muraayadaha indhaha, wareega riix mashiinka mascara mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka buufinta, mashiinka riixaya budada yar, mashiinka calaamadeysan ee jiifka ah, baakadaha isku qurxinta ee dhalaalaya bushimaha, dibnaha xoqida, lipstick, mascara, eyeliner iyo indho indho indho indheyn , sanduuqa iskuxirka ah ee khafiifka ah, dhalooyinka budada ah ee dabacsan iwm.
Iyo sidoo kale waxay waydiiyaan su'aalo qaar ku saabsan sida loo buuxiyo sifiican sare lipc gloss mascara, sida sida looga fogaado xumbada hawada markaad buuxinayso, sida looga fogaado qulqulaya, sida looga fogaado waxyeellada loo galiyo cajaladaha si loo jajabiyo, sida loo hagaajiyo mugga buuxinta, xawaaraha buuxinta, sida loo dejiyo xawaaraha xiritaanka, xarkaha xarkaha, sida loo nadiifiyo iyo sida loo hubiyo mashiinkeena buuxiya dhalaalka dhalaalaya si loo buuxiyo qaabab kala duwan iyo cabirro kala duwan, in mashiinkeena buuxiya dhalaalka dhalaalaya lagu sameyn karo kuleyl iyo isku qasid. Waxaan sidoo kale ku tijaabineynaa mashiinkayaga dhalaalka bushimaha si loo muujiyo saxsanaanta buuxinteena sare +/- 0.03g.
Waxaa jira macaamiil si ay ugu iibsadaan mashiinkeena buuxinta dhalaalka dhalaalaya isla goobta isla markaana ay doortaan dhowr tuubooyin dhalaalaya bushimaha si ay u bilaabaan noocooda cusub Sidoo kale waxaa jira macmiil u baahan mashiinka buuxinta bushimaha dhalaalaya ee loo habeeyay oo leh waxoogaa isbeddel faahfaahsan, sida dhererka mashiinka buuxinta nooca riixaya si loo hubiyo in goob shaqo oo ballaadhan laga helo wadaha iyo weliba xawaaraha buuxinta oo sarreeya. Dhammaan mashiinadayada isku qurxinta waxay qaataan qaybaha caanka ah ee caanka ah si loo hubiyo waxqabad shaqeynaya oo deggan, Beddelku waa Schneider, Relays waa Omron, Mashiinka Servo waa Panasonic, PLC waa Mitsubishi, Qaybaha Pneumatic waa SMC, Shaashadda Taabashadu waa Mitsubishi, Maamulaha kululaynta: Autonics
Ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo macaamiil hore si aad u soo booqato boggayaga internetka si aad uga hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mashiinnadayada la isku qurxiyo. Waxaan xoojineynaa mashiinadayada is qurxinta ee ku saleysan mashiinkeena caadiga ah iyo sidoo kale sida ay u baahan yihiin macaamiisha markasta. Fikrad kasta oo aad rabto inaad gaarto, si xor ah noola wadaag. Rumayso inaan noqon doonno saaxibo ganacsi oo wanaagsan sidoo kalena aan noqono saaxiibo wanaagsan.
Hawlaha nadiifinta ee mashiinka buuxinta:
Si loo hubiyo isku dheelitirka qalabka nadiifinta iyo jeermiska ee habka wax soo saarka, u soo bandhig nadaam nadiifinta iyo soosaarida qalliinka jeermiska ee hawlwadeennada, iska ilaali wasakhda jirka iyo kiimikada, si loo xakameeyo wasakheynta jeermiska loona hubiyo tayada wax soo saarka.
A. Hubso in dhammaan qalabka ku jira qalabka la nadiifiyey ka hor nadiifinta.
B. Sunta-saaraha: Biyaha la shiiday, saabuunta bisadda cad, 75% aalkolo.
C. Qalabka nadiifinta: burushka, qoriga hawada.
D. Maro cad oo cudbi ah ayaa lagu rusheeyaa 75% aalkolo si loogu isticmaalo.
E. Badeecad isku mid ah, lambarro dufcadood oo kala duwan, nadiifin, qaybaha ayaa loo isticmaali karaa iyada oo aan la kala bixin.
F. Hawl wadeenadu waxay ku shaqeeyaan sida ku cad qeexitaanka hawlgalka nadaafadda waxayna hubiyaan in tallaabo kasta oo hawlgalku buuxiso shuruudaha loo dejiyey.
G. Qofka masuulka ka ah wax soo saarka waa inuu hubiyaa in hawl wadeenada aqoonta u leh iyo farsamayaqaanadu ay ku shaqeeyaan iyadoo la raacayo qeexida hawlgalka, kormeerayaan oo ay kormeerayaan xaalada nadaafada, iyo diiwaangelinta iyo saxeexa waqtiga ku habboon.
Ka hor nadiifinta, dhammaan qaybaha waxay u baahan yihiin in gebi ahaanba lagu kala jaro caanaha kala duwan iyo lambarka midabka.
A. Buuxinta waa la dhammaystiray, badeecadaha nus-dhammaadka ah ayaa laga saaray haanta waana in la nadiifiyaa.
B. Qalabka waa la nadiifiyey, laakiin waa in mar kale la nadiifiyaa haddii uu bannaan yahay toddobaad.
C. Haddii ay si gaar ah u qeexaan macaamiisha iyo alaabtu, nadiifinta waxaa loo qaadayaa iyada oo la raacayo dukumiintiyada gaarka ah ee macaamiisha iyo alaabada.